अहिले सम्म कुन कुन राष्ट्र पुगे विश्व कपमा ? | Hamro Khelkud
अहिले सम्म कुन कुन राष्ट्र पुगे विश्व कपमा ?
मस्को (एजेन्सी) – अर्को वर्ष रुसमा आयोजना हुने विश्व कपको छनोट चरण जारी छैन । छनोट चरणका खेलहरु अझै बाँकी रहेपनि ७ राष्ट्रले अहिले सम्म विश्व कपमा स्थान सुरक्षित पारिसकेका छन् । आयोजक भएका नाताले रुस स्वतः विश्व कप खेल्न पाउनेछ । त्यसअर्थमा ३२ मध्ये ८ टोलीको विश्व कप खेल्ने टुंगो लागिसकेको छ । रुसको विश्व कपमा यो चौथो सहभागिता हो । त्यसबाहेक विश्व कपका लागि छनोट भइसकेका राष्ट्र यस्ता छन् ।
ब्राजिल – छनोट चरणमा अन्ति दुई खेल बाँकी हुँदै दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको ब्राजिल विश्व कपका लागि छनोट भइसकेको छ । पाँच पटकको विजेता ब्राजिल सदाबहार उपाधिको दाबेदार टोली हो ।
बेल्जियम – यस पटकको विश्व कपमा छनोट हुने बेल्जियम पहिलो युरोपेली राष्ट्र हो । युरोपियन छनोट चरणमा समूह ‘एच’ मा दुइ खेल बाँकी हुँदा शिर्षस्थानमा रहेको बेल्जियमको १० अंकको अग्रता छ ।
मेक्सिको – उत्तर , मध्य अमेरिका र क्यारिबियनको छनोट चरणमा पानामासँग १–० को जित लगतै मेक्सिको छनोट चरणमा अपराजित हुँदै विश्व कपमा स्थान बनाउन सफल भै सकेको हो ।
इरान , दक्षिण कोरिया , जापान र साउदी अरब – एसिया क्षेत्रबाट विश्व कपमा छनोट हुने चार टोली पक्का भइसकेको छ । यसपटक इरान , दक्षिण कोरिया , जापान र साउदी अरबले एसियाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । एसियाको छनोट चरणमा इरान समूह ‘ए’ को विजेता र दक्षिण कोरिया उपविजेताका रुपमा विश्व कपका लागि छनोट भएका हुन् ।
त्यस्तै अर्को समूहबाट जापान विजेता र साउदी उपविजेताका रुपमा अघि बढेका हुन् । छनोटको अन्तिम खेलमा जापानमाथि अविश्वसनिय जित हासिल गर्दै साउदी विश्व कपका लागि छनोट भएको हो । अस्ट्रेलियासँग समान अंक भएपनि गोलअन्तरका आधारमा साउदी अघि बढेको हो । अस्ट्रेलियाले भने प्ले अफ खेल्नु पर्नेछ ।